एकाएक किन चलचित्रबाट ब्रेक लिदैछन् बलिउड महानायक अमिताभ बच्चन? – दैनिक नेपाल न्युज
एकाएक किन चलचित्रबाट ब्रेक लिदैछन् बलिउड महानायक अमिताभ बच्चन?
एजेन्सी । बलिउड महानायक अमिताभ बच्चन लिभरमा एक्कासी समस्या देखा परेपछि अस्पताल भर्ना भएका थिए । अब भने उनि आफ्नो स्वस्थलाई ख्याद गदै केहि समय फिल्मबाट ब्रेक लिने भएका छन् । भारतिय संचार माध्यमले जनाए अनुसार अमिताभ स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनको लागी लामो समय आराम गर्ने र चलचित्रमा काम नगर्ने बताइएको छ ।
केहि समय आराम गरेपछि उनि पुन चलचित्र मा फर्केने भएका छन् । अमिताभको परिवारले उनलाई सबै काम छोडेर आराम गर्न सुझाव दिएका छन् । र उनका परिवारले पनि आराम गर्न सुझाव दिएका छन् । अमिताभ बच्चनले इमरान हाशमीको साथमा रणवीर आलिया स्टार ब्रम्हास्त्रमा काम गरिरहेका थिए । अब भने उनले अभिनयलाई टाडै राखेर आराम गर्ने भएका छन् ।